मन्त्री यादव संकटमा, राजनीनामा दिन दबाब
सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘नरसंहार’को धम्की दिन मिल्छ ? त्यो पनि बहालवाला मन्त्रीले ? कानुनी, नैतिकता कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादव यस्तै हिंसात्मक अभिव्यक्तिका कारण संकटमा परेकी छन्। त्यही कारण उनको राजीनामाको माग व्याप्त भएको छ।
मन्त्री यादवको भनाइलाई लिएर देशव्यापी विरोध तीव्र भएको छ। यसले कानुनी राज्यको उपहास गरेको, हत्या–हिंसालाई प्रश्रय दिएको, शान्ति प्रक्रियामा गइसकेको शक्तिलाई बिथोलेर समाजमा अशान्ति ल्याउने वातावरण निम्त्याएको बुद्धिजीवीहरूको ठम्याइँ छ। नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीहरूले मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन्। मनिका झाको बाइलाइनमा अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ ।
सुत्केरी र ७५ वर्षमाथिका विपन्न व्यक्तिलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क